China manery ny mpamokatra milina pelletizing mpanamboatra sy mpamatsy | Masinina manankarena
Varingam-by izy io, mazàna vita amin'ny vy vy na fantsom-by mitambatra namboarina miaraka amina vy izay mahazaka hafanana, mahazaka tosika avo, mahery, mahazaka, ary mahatohitra harafesina.
(2) barika: varingarina vy izy io, mazàna vita amin'ny vy vy na fantsom-by vita amin'ny vy mifangaro vy vy mahazaka hafanana, mahazaka tosika avo lenta, matanjaka, mahazaka, ary mahatohitra harafesina. Ny barika sy ny visy dia mifanaraka mba hahatsapana ny fanorotoroana, fanalefahana, fanalefahana, fametahana plastika, fanalefahana ary fanamafisana ny plastika, ary ny fandefasana tsy tapaka sy tsy miova ny fitaovana vita amin'ny fingotra amin'ny rafitra famolavolana. Amin'ny ankapobeny, ny halavan'ny barika dia 15-30 heny ny savaivony, ka ny plastika dia hafanaina sy vita plastika ho fitsipika iray.
(3) Hopper: ny fanambanin'ny hopper dia misy fitaovana tapaka mba hanitsiana sy hanapahana ny fikorianan'ny fitaovana. Ny sisin'ny hopper dia misy lavaka fahitana sy fitaovana fandrefesana ny fikajiana.
(4) lohan'ny masinina sy bobongolo: ny lohan'ny masinina dia vita amin'ny tanany vita amin'ny vy vita amin'ny firavaka sy tanany ivelany vy. Ny lohan'ny milina dia misy lasitra mamorona. Ny fiasan'ny lohan'ny masinina dia ny fanovana ny plastika mihodina ho lasa fihetsiketsehana mirazotra, izay mitovy sy milamina. Mitondrà ao anaty tanany vita amin'ny lasitra ary omeo ny tsindry plastika ilaina amin'ny plastika. Ny plastika dia vita amin'ny plastika ary vonoina ao anaty barika, ary mikoriana mankany amin'ny famonoana ho faty amin'ny alàlan'ny vozon'ny maty amin'ny alàlan'ny takelaka sivana misy porosy manaraka ny lalana mikoriana sasany. Ny die core sy die sleeve dia mifanaraka tsara mba hamoronana elanelam-potoana misy tsiranoka mihena, mba hahafahan'ilay plastika miempo ao anaty pataloha tubeur mitohy sy matevina miforona manodidina ny tariby fototra. Mba hahazoana antoka fa ny làlan'ny fikorianan'ny plastika amin'ny maty dia mitombina ary manafoana ny zoro maty amin'ny plastika voahangona, matetika napetraka ny tanany shunt. Mba hialana amin'ny fiovaovan'ny tsindry mandritra ny fitrandrahana plastika dia apetraka koa ny peratra fitoviana.
(5) Ny barika masinina lehibe dia mandray hafanana elektrika, ary ny fampangatsiahana rano dia mifehy ny hafanan'ny barika. Ny vodin-tsoloky dia azo alain'ny rano (menaka) hifehezana ny hafanan'ny visy. Ny lohan'ny milina dia miaraka amina sensor sensor amin'ny fanandramana ny hafanana sy ny tsindry miempo.
Ny faritra maty mangatsiaka amin'ny rivotra dia manapaka fatratra, ny milina mpanampy mavitrika ary ny lozika mihodina dia entin'ny motera AC, fitsipika mifehy ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po; ny rafitra fanamainana tsy fahampian-drano dia misy dehydrator afovoany, efijery mihetsiketsika amponga, fitoeram-pitehirizana entin'ny rivotra sns.
1. Ny granulator tokana-baoritra dia mampiditra ny fampitana, ny famahanana, ny fandroahana entana, ny pelletizing mafana be rivotra, ary ny fampangatsiahana rivotra mba hahatsapana fiasa mitohy mandeha ho azy. Ny granulator tokana toy izany dia manana fahombiazana amin'ny famokarana;
2. Ny granulator tokana-baoritra dia misy fizarana fampifangaroana, famahanana ary fitrandrahana anatiny. Araka ny safidin'ny mpanjifa, ny teknolojia fampiakarana herinaratra, ny fanafanana ny etona na ny teknolojia fanodinana solika mafana dia azo ampiasaina. Araka ny fepetra takiana amin'ny fifehezana ny mari-pana, ny fepetra takiana amin'ny mari-pana dia mifototra amin'ny fitaovana samihafa hamokatra ihany koa. Different.
3. Ny mixer dia mandray ny haitao misy ny efitrano fampifangaroana tsy mahazaka akanjo mifanohitra efatra, izay manana fahombiazana avo, fanjifana angovo ambany, fametahana plastika ary fanelezana fanamiana;
4. Ny fitaovana famahanana dia mandray ny teknolojia tsy manam-paharoa an'ny orinasa, izay afaka manampy amin'ny fampifangaroana ireo fitaovana mifangaro ary manery ny famahanana ny extruder volo tokana hanatsara ny fahombiazana sy ny kalitaon'ny granulation;
5. Na ny visy kambana avo roa heny na ny visy tokana dia entin'ny teknolojia fiovam-po matetika AC, izay afaka mifanaraka amin'ny takian'ny teknolojia isan-karazany;
6. Ny loha lohan'ny masinina dia mandray fitaovana fanovana efijery haingana, izay mitsitsy fotoana sy ezaka ary sariaka amin'ny tontolo iainana;
7. Ny granulator dia mandray lohan'ny fanapahana rotary sy fitaovana enti-manatsara ny famafana rivotra mafana;
8. Ny fampangatsiahana pellets dia mandray ny Separator Separator mampita sy ny cooler drum na ny écran vibrant disk;
9. Ny rafitra fanaraha-maso herinaratra dia mandray ny PLC, ny fifandraisana an-tsary ary ny teknolojia fiovam-po matetika mba hahatsapany ny fanaraha-maso mandeha ho azy dingana feno.